चिठी र पार्सललाई ट्र्याकिङ – Hotpati Media
चिठी र पार्सललाई ट्र्याकिङ
७ असार २०७६, शनिबार ०७:१८ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
काठमाडौं-तपाईंले हुलाकमार्फत पठाएको चिठीपत्र सम्बन्धित ठाउँमा कति दिनमा पुग्छ ? आज कहाँ पुग्यो होला ? भोलि कहाँ पुग्नेछ ? कहींकतै अलमल भयो वा अड्कियो ? विगतमा यस्ता जानकारी पाउन सकिन्नथ्यो। लेखिएकै ठेगानामा चिठी पुग्दैन या बाटोमै हराउँछ कि भन्ने चिन्ताले सताउँथ्यो प्रेषकलाई।
तर अहिले यसबारे कम्युटरको स्क्रिनमा घरबाटै जानकारी पाइनेछ। यसका लागि हुलाक सेवा विभागले विशेष ट्र्याकको व्यवस्था गरेको छ। गोश्वारा हुलाक कार्यालयको ‘डब्लूडब्लूडब्लु डट जीपीओ डट जीओभी डट एनपी’ मा लग अन गरी डोमेस्टिक ट्र्याकिङमा चिठीको कोड नम्बर राखेपछि सबै जानकारी प्राप्त हुन्छ।
हुलाक सेवा विभागले देशका सबै जिल्लामा चिठी र पार्सल ट्र्याकिङ गरेपछि प्रयोगकर्ताले सहज सेवा पाएका छन्। साथै चिठी हराउने वा समयमै नपुग्ने समस्या हटेको छ। हुलाक सेवालाई जिम्मेवार र कर्मचारीलाई जबाफदेही बनाउन प्रविधिले सघाएको गोश्वरा हुलाक कार्यालयका प्रमुख वेदप्रसाद भण्डारीले बताए। ‘यो प्रविधि प्रयोगमा आएपछि चिठी हराएको गुनासो आएको छैन’, उनले भने।
नेपालमा चिठीपत्रमार्फत खबर, सूचना र समाचार आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहले १९३५ सालमा नेपाल हुलाक घर स्थापना गरेका थिए।
एक सय ४१ वर्षे इतिहास बोकेको हुलाक ढिलो गरी प्रविधिसँग हिँड्न खोजेको छ। तीन वर्षदेखि यस्तो प्रविधिबाट स्वदेशभित्र चिठी र पार्सलको ट्र्याकिङ सुरु भएको हो। अहिले देशका ७७ वटै हुलाकमा यो प्रविधि पुगेको आजको अन्नपूर्ण दैनिकले छपेको छ |